सोमबार प्रकाशित अच्युत वाग्लेको ‘वार्द्धक्यतन्त्रका भड्खालाहरू’ रोचक छ  । वार्द्धक्यतन्त्र वा वृद्धतन्त्रको राज्यसत्तामा हालीमुहाली हुनाले मुलुक चौपट भएको भन्नचाहिँ अलिक मिल्दैन  ।
उमेरभन्दा पनि व्यक्तिको सोचले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनमा भूमिका खेल्ने कुरालाई लेखकले आत्मसात नगरेको पाइयो । युवा पुस्ता असक्षम तथा निकम्मा भएर बूढाहरूले मौकामा चौका हानेका त हैनन् भनी लेखकले किन नबुझेका होलान् ?
पदीय लुछाचुँडीको सन्दर्भमा भने नेपाली समाज नै पदपूजक छ । पदमा बसेको मान्छेलाई मात्रै सम्मान गर्ने र पदबाट बाहिरिँदा टेरपुच्छर नलाउने समाजको प्रवृत्तिलाई राम्ररी बुझेका नेताहरूले त्यसैकारणले आजीवन पदमा बसिरहन मरिहत्ते गरेका हुन् कि ? प्राकृतिक सम्मानको कुरा गर्दा समाजमा अझै त्यस्तो चेत पलाइसकेको छैन । स्वार्थै–स्वार्थको परिबन्दमा जकडिएको समाज नै विकृति तथा विसङ्गतिको मूल जड हो । ‘जेरोन्टोक्रेसी’को जकडबाट मुक्त हुँदैमा सबै क्षेत्रमा कायापलट हुन्छ भनी सोच्नु बेकार हो ।
प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ १२:१०